Filimside.net | Author Archives | 22
Home » Entries posted by Super Admin (Page 22)
Posted on November 6, 2017 by Super Admin and saved under Arimaha Bulshada, Wararka Maanta
Macalimadda dadka barta jirdhiska Laura Mesi ayaa waxay daaha ka qaaday inay muddo 20 sanno ah raadineysay nin iyada ku habboon (Mr Right), si kastaba ha ahaatee, isku daygeeda waa ay ku guuldarreysatay. Maadaama ay si dhab ah u qaadatay guuldarrada, Laura Mesi ayaa markaas hor istaagatay muraayadda, waxayna bilowday…
Comments Off on SAWIRRO: Gabar u dhalatay dalka Italy oo ISGUURSATAY, waxa ku qasbay iyo qaabka uu arooskeedu u dhacay! / Continue reading →
AKHRISO: Afartaan sabab dartood waad ku qasban tahay inaad marwalba xasuusato filimka Bhool Bhulaiyaa ee Akshay iyo Vidya
Posted on November 6, 2017 by Super Admin and saved under Wararka Maanta, XAQIIQOOYINKA FILIMADA
Marka ay wada-shaqeeyaan Akshay Kumar iyo filimsameeyaha caanka ah Priyadarshan guul ayey si wadajir ah ugu xisaabtamaan, waxaana caddeyn kuugu filan ‘Hera Pheri’ iyo ‘Garam Masala’. 10 sannpo ka hor, labadoodu waxay la yimaadeen filimkii Bhool Bhulaiyaa kaasoo xambaarsanaa sheeko qosol iyo cabsi isugu jirta (Comedy horror film). Shabakadda Bollywoodbubble…
Haddii ay xaaskaagu nolosha kugu dhibto sida ninkaan u dhashay England oo kale ayaa la sameeyaa (Warbixin xiiso leh)
Nin 62 sanno jir ah oo kasoo jeeda caasimadda labaad ee dalka England ee Birmingham City ayaaa wuxuu dhowaan qabsaday cinwaannada sarre ee wargeysyada kasoo baxa Britain. Ninkaan oo lagu magacaabo Malcolm Applegate ayaa wuxuu muddo shan sanno ah ku noolaa keynta ka hor inta uusan magaalada kusoo laaban, isagoo…
Comments Off on Haddii ay xaaskaagu nolosha kugu dhibto sida ninkaan u dhashay England oo kale ayaa la sameeyaa (Warbixin xiiso leh) / Continue reading →
Middee wanaagsan labada atariisho ee walaalaha ah Shamita Shetty iyo Shilpa Shetty marka ay timaado jilliinka?
Posted on November 6, 2017 by Super Admin and saved under Bollywood News, Wararka Maanta
(Filimside, Mumbai)- Atariishada caanka ah Shamita Shetty ayaa shaashadaha kusoo laaban doonta ka dib muddo dheer oo ay ka maqneyd, waxayna daadihin doontaa showga Yo Ke Hua Bro. Walaasheed ahna atariisho laga qadariyo Bollywood-ka Shilpa Shetty ayaana waxay ammaantay tayada Shamita Shetty, Shilpa ayaana caddeysay inay Shamita iyada ka tayo…
Comments Off on Middee wanaagsan labada atariisho ee walaalaha ah Shamita Shetty iyo Shilpa Shetty marka ay timaado jilliinka? / Continue reading →
Miyey Hema Malini dib ugu soo laaban doontaa shaqada jilliinka aflaanta? – Iyada ayaa ka jawaabtay!
(Filimside, Mumbai) – Atariishada halyeeyga ah ee shirkadda Bollywood Hema Malini ayaa waxay daaha ka qaaday in aysan kusoo laaban doonin shaqada jilliinka. Hema Malini sidoo kale waxay ku lug leedahay siyaasadda. Si kastaba ha ahaatee, Hema Malini gabi ahaanba albaabka kama xiran shirkadda Bollywood, waxayna ballan qaaday inay ka…
Comments Off on Miyey Hema Malini dib ugu soo laaban doontaa shaqada jilliinka aflaanta? – Iyada ayaa ka jawaabtay! / Continue reading →
Posted on November 5, 2017 by Super Admin and saved under Arimaha Bulshada, Wararka Maanta
Atariisho 45 sanno jir ah oo kasoo jeeda dalka Jarmalka, ayaa waxay isku durtay bakteeriyada loo yaqaanno Bacillus F taasoo la sheegay inay jirto 3.5 milyan oo sanno marka lagu jaangooyo halbeegga sannadka bekteeriyada, Atariishadaan waxaa lagu magacaabaa Manoush, waxayna isugu durtay bakteeriyada Bacillus F si aysan dhallintu uga muuqan.…
Comments Off on VIDEO: Atariisho caan ah isku durtay bekteeriyo 3.5 sanno jir ah si ay ugu muuqato gabar dhallinyaro ah (Hadda sidee ayey u taallaa?) / Continue reading →
Lammaane isku galmooday isagoo ku sugnaa maqaayadda caanka ah ee biisaha laga iibsado ee Domino Pizza Outlet taasoo ku taalla gobolka State of Michigan ee dalka Mareykanka. Warbaahinta ayaana haatan sheegeysa in lammaanahaan digniin kama dambeys ah la siiyey isla markaana loo sheegay in laga yaabo inay wajahaan ciqaab xabsi…
Comments Off on Lammaane uu soo daahay dalabkoodii Pizza-ha oo xaajeystay, haddana tallaabo yaab leh ayaa laga qaadi doonaa! / Continue reading →
SAWIRRO: Adduunka Oo Lagu Soo Kordhiyey Saacad Mukeyf Leh – Imisa Lacag Ah Ayaad Ku Heli Kartaa?
Dunida waxaa lagu soo kordhiyey saacad cusub oo Apple ah (New Apple Watch) taasoo la jaabqaadeysa heerka tiknoolajiyadda casriga ah ee caalamku haatan ku tallaabsaday. Saacaddaan oo aad gacanta ku xiraneyso ayaa waxay leedahay qaboojiye jirka ah ama mukeyf (Air-Conditioning Watch) waxaana loo yaqaannaa Aircon Watch. Dhowaan ayaa iibkeeda la…
Comments Off on SAWIRRO: Adduunka Oo Lagu Soo Kordhiyey Saacad Mukeyf Leh – Imisa Lacag Ah Ayaad Ku Heli Kartaa? / Continue reading →
Michael Jackson Oo Dib Usoo Noolaaday – Gabarna Saaxiib La Noqday (Maxayse ka dhaheen taageereyaashiisu?)
Gabar ayaa sawir lasoo gashay wiilka ay saaxiibka la tahay ka dibna waxay soo dhigtay sawirkaas mareegaha caanka ah ee Twitter-ka. Si kastaba ha ahaatee, sawirkaan ayaa saacado gudahood caan ka noqday Twitter-ka iyadoo malaayiin shaqsi ay isla wadaageen. Sababtoo ah wiilka ay gabadhaani sawirka lasoo gashay ayaa wuxuu si…
Comments Off on Michael Jackson Oo Dib Usoo Noolaaday – Gabarna Saaxiib La Noqday (Maxayse ka dhaheen taageereyaashiisu?) / Continue reading →
Khubaro ka tirsan jaamacadda Michigan ee ku taalo dalka Mareykanka ayaa sameeyey cilmi baaris ku aadan sababaha keena furitaanka iyo cidda Mas’uulka ka ah Ragga ama Dumarka? Websiteka la yiraahdo Phys.org ayaa faahfaahin buuxda ka bixiyey dasaarada ay sameysay jaamacadaas. Cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadaas ayaa Su’aalo waydiiyey ilaa 355…
Comments Off on Yaa codsado furriinka inta badan Ragga ama Dumarka? (Daraasad wax badan banaanka soo dhigtay) / Continue reading →